पदोन्नति: मार्टिन Vrijland संग नि: शुल्क छुट्टी: मार्टिन Vrijland
पदोन्नति: मार्टिन Vrijland संग छुट्टी मा नि: शुल्क
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	6 अगस्ट 2019 मा	•2टिप्पणिहरु
आउँदै गरेको हप्ता म गहन लेखन को वर्ष पछि मेरो टाउको को लागी समय खर्च गर्न चाहान्छु। कहिलेकाँही केही आराम गर्न र स्क्रिन र इन्टरनेटबाट आफैंलाई टाढा राख्नको लागि यो आवश्यक हुन्छ। यसैले म तपाईंलाई छुट्टीको प्रस्ताव बनाउन चाहन्छु।
भर्खरका वर्षहरूमा मैले सदस्यता अनुरोध गर्न नियमित कल गरेको छु। दुर्भाग्यवश, त्यो उत्साह एकदम ठूलो छैन र जब म डे टेलीग्राफको समान गर्दछु र मेरा लेखहरू शुल्कको लागि प्रस्ताव गर्दछु, म पाठकहरूबाट धेरै रिसाउने प्रतिक्रिया पाउँछु जसले मलाई यो सबै निःशुल्क रूपमा गरिरहनु पर्छ भन्ने सोच्छन्। तसर्थ तर्क यो हो कि म धेरै मानिसहरूलाई जगाउँछु। जहाँसम्म, यहाँ पनि चिमनीले धुम्रपान गरिरहनुपर्दछ र त्यसैले म तपाईंलाई फेरि बोलाउन चाहान्छु सदस्यताको लागि। विनिमयमा, तपाईं मलाई छुट्टीमा लिन सक्नुहुन्छ।
भर्खरका वर्षहरूमा लेखिएका लेखहरूको स the्ख्या 2100 वरपर छ। शुरुका दिनहरूमा म प्राय: प्रति दिन2लेखहरू लेख्दछु, तर त्यो द्रुत गति वास्तवमै टिकाउ थिएन। यो Anas Aauragh मामला को समय थियो; मिडियामा दुराचार बढाउनको सुरुवात। हालसालै मेरा लेखहरू 'जागरूकता' र हाम्रो अस्तित्वको सारको बारेमा बढी छन्, किनकि हामीले यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ कि कुन स्तरमा समाजमा भएका सबै दुर्व्यवहारहरूको समाधान पाउन सकिन्छ। तपाईं एकै खेल मैदान स्तरमा विश्वमा समस्याहरू समाधान गर्न सक्नुहुन्न। त्यसका लागि, धेरै व्यक्तिहरू एकै साथ उठ्नुपर्दछ, र यो त्यस्तो कुरा जस्तो देखिन्छ जुन हामीले अभ्यासमा प्राप्त गर्न सक्दैनौं। त्यसकारण तपाईं कुन किसिमका व्यक्तिहरूद्वारा घेरिएको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन यो आवश्यक छ (उदाहरणका लागि, के तिनीहरू प्रेरित छन्?) र कसरी विश्व शासित छ।
यसैले तपाईं मेरो आलस्य छुट्टी कुर्सीबाट त्यस विषयमा लेखहरू पढेर मलाई छुट्टीमा लैजान सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ यस वेबसाइटको मेनू मुनिको हेर्नु हुन्छ भने तपाईले देख्नुहुनेछ कि त्यहाँ सम्पूर्ण लेखहरू छन्। मैले आइटमहरू राख्ने प्रयास गरें जुन विभिन्न मेनु आईटमहरू मुनि महत्वपूर्ण छन्। तपाईंको छुट्टीको लागि म तपाईंलाई लेखहरू पठाउन चाहन्छु यो कोटी यसलाई ध्यानमा राख्नुहोस्। यसलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् र सबै लिंकहरू पनि व्यवस्थित गर्नुहोस् जुन लेखमा फेला पार्न सकिन्छ। यो निश्चित रूप मा तपाइँ रमाईलो छुट्टी पढाइ दिनुहुन्छ।
चाँडै म फेरि कलम लिन को लागी ऊर्जा छ, तपाईं दैनिक नोटिस वा न्यूजलेटर को लागी साईन अप गर्दा तपाईंले यो याद गर्नुहुनेछ, उदाहरणका लागि। दुर्भाग्यवस, यस वेबसाइटको सदस्य प्लगइनको शुरूमा iDeal प्लगइनसँग केही एकीकरण समस्याहरू थिए, त्यसैले केही सदस्यताहरू सक्रिय पारिएनन् वा म्याद सकिएन। त्यसकारण म चाहान्छु वा सदस्यता लिन सक्दछु यदि फेरि सदस्यता सक्रिय छ कि छैन फेरि हेर्नको लागि। यदि तपाईं अझै सदस्य हुनुहुन्न भने, तर तपाईं मेरो कामलाई समर्थन गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं सक्नुहुन्छ यहाँ सदस्य बन्नुहोस् of यहाँ एक पटक दान यो गर अग्रिम धन्यवाद र एक राम्रो छुट्टी छ!
ट्याग: विशेष, मार्टिन, vakantie, नि: शुल्क देश
7 अगस्ट 2019 मा 22: 36
खुशी छुट्टि मारिन! पछिल्लो समयको गहन लेखको लागि धन्यबाद। पछिल्ला केही हप्ताको टुक्रा मेरो साथ एकदम राम्रो काट्यो, त्यसैले तपाईंको ब्रेक राम्रो हुनेछ will
मलाई आशा छ कि धेरै व्यक्तिहरु एक पटक दान वा सदस्यता को लागी तपाइँको कल लाई जवाफ दिनेछन्। यस्तो कलहरूमा प्रतिक्रियाहरूमा यो उल्लेखनीय रूपमा शान्त रहन्छ।
11 अगस्ट 2019 मा 13: 45
तपाईंले यसलाई अर्जित गर्नुभयो। PayPal मेरो लागि मासिक दान को सम्बन्धमा राम्रो काम गर्दछ।
« किन विश्वास राख्न यत्ति गाह्रो छ
जेफ्री एपस्टाइनले आफ्नो सेलमा आत्महत्या गरे (अपडेट) »
कुल भ्रमण: 4.119.071